Daruustii laga bartay doorashadii Guddoonka Baarlamanka | KEYDMEDIA ENGLISH
Daruustii laga bartay doorashadii Guddoonka Baarlamanka
Waa doorasho ka turjuntay dareenka shacabka, dirtayna farriin ku aaddan in dalku uu u baahan yahay is-baddel deg deg ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Utun weyn ayey hoggaanka Villa Soomaaliya ku noqotay doorashadii Guddoonka Labada Aqal ee dhawaan Muqdisho ka dhacday, taas oo ay ku soo baxeen dad ka rayi duwan hoggaanka waqtigiisu dhamaaday.
Madaxweynihii hore Farmaajo oo horey u soo saartay xildhibaanno uu filayey in ay u hiillin doonaan, ayaa taasi ku hungoobay, wuxuuna ogaaday, in ay fududahay in shakhsi la iibsado, balse ay adag tahay inuu ka tanaasulo ruuxaasi qadiyaddiisa iyo sharafkiisa qofnimo.
Maanta waa mid niyad jabsan, kaas oo dareensan in lagaga awood roonaan doono doorashada xilka ugu sareeya dalka, maddaama uu daruus ka dhaxlay doorashadii Guddoonka Baarlamanka 11-aad ee dalka.
Inta badan shacabka ayaa iyaguna ku diirsaday sida Baarlamanku u tixgaliyey dareenkooda, isla markaana uu ula yimid awood is-baddel sameyn karta, dalkanna ku hagi karta dhabe toosan.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya, in Baarlamanku uu gutay waajibkiisii ugu horreeyey, taas oo mudan in la bogaadsho, waxaana sidoo kale kaalin weyn ay ka saaran tahay, doorashada madaxtinimo ee dalka, markaas oo laga doonayo in ay dalka u xulaan hoggaan qiimo leh oo samata bixin kara dalka iyo dadka.
Farmaajo, ninka muddo xileedkiisu dhamaaday, ee Villa Soomaaliya ku fadhiya habka sharci darrada ah, ayaa dalkeenna Soomaaliya u horseeday dhibaatooyin kala duwan, oo ay ugu weyn tahay, dib u soo nooleynta qabyaaladda, wuxuuna hub isugu dhiibay qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee walaalaha ah.
Wuxuu sidoo kale sababay in laga aamin baxo ciidamada qaranka, isagoo ku tagri falay awoodoodda, wuxuuna u adeegsaday maamullada dalka ka jira, isagoo ku weeraray madaxdii dalka soo martay.
Sida ay sharci yaqaannadu qabaan, Farmaajo ayaa ku tuntay dastuurka dalka, maddaama uu si cad u diiday in dalku uu doorasho aado, wuxuu dhanka kale diiday in caddaalad loo raadiyo muwaadiniin ku baxay gacantiisa, sida Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sarkaal ka tirsan hay'ada Nabad-sugidda.
In shacabku ku farxaan jabka Villa Soomaaliya ka soo gaaray doorashadii Guddoonka Baarlamanka, waxaa kow ka ah, culeyska dhallinyarada ay dhaxleen muddadii uu Farmaajo xukunka haayey, taas oo ay ugu horreyso shaqo la'aanta, iyadoo dowlada aysan qoran wax shaqaalo ah.
Taa baddelkedana waxaa si bareer ah ay ciidamada ka amar qaata u dileen dhallinyaradii shaqo abuurka sameystay ee ku xamaalanayey mootada bajaajta loo yaqaano, kuwaas oo tirada sanadkii ugu danbeeyey laga dilay ay kor u dhaafeyso 150 dhalinyaro ah.
Howlaha ugu waa weyn ee Baarlamankan 11-aad horyaalla waxaa ka mid ah, dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka ah, iyo xeer u sameynta sidii ay u kala madax bannaannan lahaayeen hay'adaha fulinta iyo sharci dajinta dalka, oo muddooyinkii ugu danbeeyey isku milnaa.